Card Payement Service to Be Available in Late July | Myanmar Business Today
HomeAutomobileCard Payement Service to Be Available in Late July
AutomobileIT & TelecomBusinessLocalMMBIZ News
Yangon Region Transport Authority (YRTA) will introduce Yangon Payment Service (YPS) on buses servicing in Yangon on July 21.
The payment service, which the Chief Minister of Yangon promised to launch within six months after the new bus system is implemented in 2016, will be used in 597 buses initially and the card reading machines have been installed on 1,948 buses.
Public owned bus companies YPBC and Bandula Company will be the first ones to introduce the payment service on their bus lines 43, 62, 87, 88, 14, 25, 30, 38, 89, and 96.
Asia Starmar Transport Intelligent, who won the bid to implement the Yangon Payment System designed to facilitate payments for Yangon Water Bus, Circular Train, and shopping centers, will sell the YPS cards at overahundred G&G convenience store and YPS Service Center in Sule, Thamine, and Tamwe.
Buses in Yangon transport around 1.9 million commuters every day, accounting for half of the mass transportation. Yangon Bus Service, which replaced the old bus system in Yangon in 2016, has 102 bus lines transporting commuters with 4,400 buses.
YBS စီးရာတွင် ကတ်ဖြင့် ငွေပေးချေသည့် စနစ်Yangon Payment Service (YPS) ကို ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် စတင်တော့မည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (YRTA) မှ သိရသည်။
ယင်းစနစ်ကို ယာဉ်အစီးပေါင်း ၅၉၇ စီးတွင် အသုံးပြူမည်ဖြစ်ပြီး (YPS) စက်များကို မော်တော်ယာဉ် ၁,၉၄၈ စီးတွင် တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်။
ကတ်ဖြင့် ငွေပေးချေသည့်စနစ်ကို ဘတ်စ်ကားအများပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် YPBC နှင့် ဗန္ဓုလ ကုမ္ပဏီပိုင် ဘတ်စ်ကားယာဉ်လိုင်းများတွင် စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်။ (YPS) အသုံးပြုမည့်ယဉ်လိုင်းများမှာ ၄၃ ၆၂ ၈၇ ၈၈ ၁၄ ၂၅ ၃၀ ၃၈ ၈၉ ၉၆ တို့ပါဝင်ကြောင်းလည်းသိရသည်။
YPS ကတ်များကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ G & G ဆိုင် ပေါင်းတစရာကျော်တွင်ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ကာ ဆူးလေ သမိုင်း တာမွေ တို့ရှိ YPS Service Center များတွင်လည်းရောင်းချပေးသွားမည်ဟုသိရသည်။
ရန်ကုန်တွင် ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုကြသူ နေ့စဉ်ခရီးသည် ၁.၉ သန်းခန့်ရှိသည်။
ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်ရန်ကုန်မြို့တွင်း ခရီးစဉ်အားလုံး၏ ထက်ဝက်နီးပါးကို ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးတွင် YBS ယဉ်လိုင်းပေါင်း ၁၀၂ လိုင်းရှိကာ တစ်ရက်လျှင် ယဉ် အစီးရေ ၄၄၀၀ နီးပါးပြေးဆွဲလျက်ရှိသည်။
Previous articleMyanmar Plans to Reopen to Asian Travellers in October
Next articleThe 2020 US TIP Report Fails Reflect the Country’s Efforts: Myanmar